Tube Mill & Pipe Machinery Vagadziri - China Tube Mill & Pipe Machinery Fekitori & Vatengesi
Cheka kureba mutsetse
Iyo Yakatemwa Kureba Mutsetse iyo inoshandiswa kumisikidza, kuenzanisa uye kucheka simbi coil muiyo inodiwa kureba kweyakagadzika jira zvinhu uye stacking.It inokodzera kugadzirisa chando chakakunguruswa uye inopisa yakapetwa simbi, coil, kwakakurudzira simbi coil, silicon simbi coil, isina waya simbi coils, aruminiyamu coils nezvimwewo muhupamhi hwakasiyana zvinoenderana nemushandisi yekugadzira zvirevo uye kucheka futi.
Otomatiki Yekumhanyisa Yekumhanyisa Line
Otomatiki Yekumusoro-Yekumhanyisa Slitting muchina inoshandiswa kune coil ine akasiyana maratidziro, kuburikidza nekusunungura, kuenzanisa, uye kucheka kureba kune yakatsetseka ndiro iyo inodikanwa urefu uye upamhi.
Iyi tambo iri kushandiswa zvakanyanya musimbi yesimbi yekugadzirisa indasitiri, senge mota, mudziyo, mudziyo wemumba, kurongedza, zvekuvaka, nezvimwe.
Stainless-simbi Industrial pombi yekugadzira muchina
Stainless-simbi Pipe Kugadzira Machine Series ainyanya kushandiswa kugadzirwa maindasitiri Stainless-simbi nenyere. Sezvo welded pombi tekinoroji kukura, simbi isina simbi yakasungwa pombi yakatsiva isina musono pombi munzvimbo zhinji (Senge kemikari, zvekurapa, winery, oiri, chikafu, mota, mhepo yekuisa, nezvimwewo)
ERW Tube & Pipe Mill Muchina Series ndiyo michina yakasarudzika yekuburitsa yakakwira-frequency yakatwasuka musono yakasungwa pombi uye chubhu yeyakaumbwa pombi uye maindasitiri pombi ine Φ4.0～ Φ273.0mm uye ukobvu hwemadziro δ0.2～12.0 mm. Mutsara wese unogona kusvika pakukwirisa uye nekukasira kuburikidza nekugadzirisa dhizaini, yakanakisa sarudzo yezvinhu, uye kunyepa kwekunyepedzera uye mabhanzi. Mukati meyakakodzera renji yepombi dhayamita uye rusvingo ukobvu, pombi yekumhanyisa mhanyisa inogadziriswa.